Tolo-tanana : nahangona 35 tapitrisa Ar ny MFB | NewsMada
Tolo-tanana : nahangona 35 tapitrisa Ar ny MFB
Nahatratra 35.553.200 Ar ny vola voaangona ho fanomezan-tanana ireo traboina any Androy avy amin’ny mpiasan’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola. Nahatsapa ireo mpiasa fa manana adidy amin’ny mpiray tanindrazana ka izany indrindra no nanosika ny azy ireo nanao fitia tsy mba hetra.
Natolotry ny solontenan’ny mpiara-miasan’ny minisitera, notarihin’ny minisitra, Rakotoarimanana Gervais ho an’ny minisitry ny Mponina izany fandraisana anjara ho amin’ny fanampiana ny mponina any atsimo izany, omaly teny Antaninarenina.
Nanome toky ny minisitry ny Mponina fa hipaka amin’ireo vahoaka sahirana tokoa ny tolo-tanana avy amin’ny mpiara-miasa eo amin’ny minisitera. Izy mivantana no hanara-maso akaiky ny fandaniana ho amin’ny fampitaovana ao anatin’ny fangaraharana tanteraka.
Efa mandray ny andraikiny ny fitondram-panjakana; maro ihany koa ny fanampiana isan-karazany efa voarain’ireo mponina any atsimo. Hanampy izany izao vola azo avy amin’ny tolo-tanana izao.